I-china calcined mica powder mveliso kunye nabathengisi | IHuajing
Iimveliso zethu series calcined mica amkele inkqubo iqondo lobushushu-dehydration ukwenza amanzi mica ilahleko, ukugcina impahla kwangaphakathi inkqubo.The imveliso ulungile kokusingqongileyo kwaye akukho pollution.The lesibini mica shushu ngokulinganayo kwaye umgangatho ezinzileyo. Yeyona nto ilungileyo yokukhetha izinto ezizodwa ze-welding, izinto zokwakha ngokubanzi kunye nee-insulators zombane.
Calcined Mica (Izinto Welding)
Umba Umbala Mhlophe (ilebhu) Particle Ubungakanani (μm) Ucoceko (%) Izinto eziziMagnetic (ppm) Ukufuma （%） I-LOI (650 ℃) pH Ubuninzi bobunzima (g / cm3) PHAWULA
ICalcined Mica, Izinto zokuWelding）
F-150 Ubomvu wegolide —— 50 ～ 100 Ukuyalela kwi-97 —— 0.1 0.1 7.6 0.22
F-200 Ubomvu wegolide —— 40 ～ 75 Ukuyalela kwi-97 —— 0.1 0.1 7.6 0.22
F-300 Ubomvu wegolide —— 30-55 Ukuyalela kwi-97 —— 0.1 0.1 7.6 0.19
I-Huajing yokwakha ibakala le-mica powder luthotho lweemveliso ezisisiseko ze-mica ezenziwa zi-mica flakes ezivela eLingshou, kwiphondo laseHebei. Ubungakanani beengqekembe zeemveliso zigubungela uluhlu lwe-5mm ukuya kwi-10um. Inkqubo yokuhlanjululwa iphuhlisiwe ngokuqhubekayo isithuba esingaphezulu kweminyaka engama-40. Okwangoku, ubukhulu becala isetyenziselwa ibhodi yomhombiso wangaphakathi, ibhodi yokulenga yangaphandle, imibhobho yogutyulo edityanisiweyo, izinto zokwakha ezinobungane kwindalo, iifestile zentsimbi yeplastiki kunye neminyango, imabhile engeyiyo njalo njalo. In ukutyabeka efayilini, oko stably esetyenziswa kwishishini lokwakha, ezifana yangaphandle udonga ipeyinti, ipeyinti yokumakisha, iipleyiti, ipeyinti enzima anti ezonakalisayo. Kwizinto ze-welding, i-ceramics, i-oil drilling, i-friction material, iiprojekthi ezichasene ne-seepage, ukuphucula umhlaba kunye nezinye iindawo ezininzi zokuzalisa, i-mica yinto ebalulekileyo yokugcwalisa izinto. UMika udlale indima enkulu ekugcineni amandla kunye nokwandisa ukusebenza ngokukuko.
Umahluko ophambili phakathi kwe-mica ecalic kunye ne-mica eqhelekileyo:
1. Esona sithako ngumxholo wamanzi. Umxholo wokufuma we calcined mica ungaphantsi kwe 0.01%, kwaye leyo ye mica eqhelekileyo ingaphantsi kwe 0.5%.
Eyesibini kukutsha kwelahleko. Ukulahleka okutshisayo kwe-mica ye-calcined ingaphantsi kwe-0.1%; ilahleko evuthayo yemicrosoft eqhelekileyo ingaphantsi kwe-1.5%.
2. Umbala weMuscovite oqhelekileyo uhlala umhlophe okanye umhlophe ngokwesilivere, kodwa emva kokubala, unokuba bomvu, ubhedu, okanye umbala omdaka.
3. Ngombala wayo wegolide oqaqambileyo, i-mica e-calcined iyathandwa kumacandelo okuhombisa, iidyasi kunye neepeyinti zobugcisa, kunye nokukhokela kwindlela ye-welding ephezulu ngenxa yezithako zayo ezikhethekileyo.
Egqithileyo I-Muscovite yendalo mica powder
Okulandelayo: Uhlobo lwe-mica powder
Mica ekhethekileyo yeCalcined yeWelding ePhambili
Mica ekhethekileyo yeCalcode ye-Electrode
Mica ekhethekileyo yeCalceld yeWelding